एमाले–माओबादी एकताबारे बजारमा चलेका ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’::Pathivara News
काठमाडौं, एमाले माओवादी बीचको पार्टी एकता नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक घटना हो । यसले एकातिर फूटको इतिहास बोकेका वामपन्थी दलहरुको ठूलो एकता निर्माण गरेको छ भने अर्कोतिर वाम दलका समर्थक र कार्यकर्तामा अतुलनीय उत्साह थपेको छ । अझ दुई पार्टीबीच एकीकरण गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र आर्थिक समृद्धि र सुशासनतिर जाने उनीहरुको जनअनुमोदित वाचा पूरा गर्न यसले बल पुग्नेछ ।
तर, दुई पार्टीको एकता खाका बाहिर सार्वजनिक भएसँगै वाम विरोधी कित्तामा अत्यास र भागदौड पैदा भएको छ । राजनीतिलाई ब्यक्तिका स्वार्थ साधनाको तदर्थतामा जकड्ने र आम नागरिकको जीवनमा होइन सत्ता आकांक्षीहरुको नाफा नोक्सान लेखाजोखा गर्ने आम सञ्चार प्रबृत्ति पनि यसप्रति आश्चर्य मानिरहेको छ । एमाले र माओवादी बीच अवका ५ वर्ष भरी नै एकै ब्यक्ति प्रधानमन्त्री रहने सहमति हुँदा पनि ‘आलोपालो’को मनोगत सूचना त्यसको उपज हो । राजनीतिक बेथितिको तदर्थतामा राजनीतिक बृत्त मात्र होइन सञ्चारजगत पनि रमाएको छ भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो । जस्तो कि माओवादी अध्यक्ष आफ्ना सार्वजनिक घोषणाहरुमा नै भन्दैथिए– अवको ५ वर्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री । तर, सञ्चार माध्यम त्यसप्रति चित्त नबुझेर सूचना पस्किंदै थिए– आलोपालो सरकारको नेतृत्व ।
आकार र जनसमर्थनको हिसाबले एकीकृत नेकपा विशाल र अपराजेय देखिन्छ । त्यसैले यसको प्रभावलाई निस्तेज गर्न अनेक बजार हल्ला र ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ चलाइएका छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । त्यस्ता हल्ला कतिपय हास्यास्पद छन् भने कतिपयले झूटलाई सत्य जस्तै बनाएर पेश गरेका छन् ।
यस्तो हल्ला चलाउनेमा कांग्रेस समर्थक भनेर चिनिएकाहरु हावी देखिन्छन् । यी हल्लाले गैरवाम कित्ताको त्रास ब्यक्त गरेको छ र यसबेला उनीहरुको दिमागमा के चलिरहेको छ भन्ने पनि देखाएको छ ।
यस्ता केही षड्यन्त्र सिद्धान्त यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
१. वामएकता केवल भ्रम हो, उनीहरु फेरि फुट्छन्
दुई पार्टीका अध्यक्ष र शीर्ष नेताले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि वाम एकता नहुने शंका हटिसकेको छ । हिजो वामहरु फुटेका थिए तर आज उनीहरु जुट्न लागेको यथार्थ हो । त्यसैले यो एकता भ्रम होइन । फेरि फुट्ने कुरा पनि काल्पनिक हो । भविष्यमा हुन सक्ने घटनालाई कल्पनामा हालेर बर्तमानमा प्रस्तुत गर्नु षड्यन्त्र सिद्धान्त नै हो । भविष्य कसले पो देखेको छ र !
२. भारतले वाम एकता बिथोलिदिन्छ र नेपालमा दुई–तीन वर्ष नपुग्दै मध्यावधि चुनाब हुन्छ
यो सिद्धान्तको आगमन कांग्रेस कित्ताबाट भएको हो । सिद्धान्त भन्दा ज्यादा ‘यस्तो भैदियो भने कांग्रेसलाई राहत हुन्थ्यो’ भन्ने कामना यसमा देखिन्छ । त्यहि कामनाको जगमा यसको प्रतिपादन भएको हो । एमाले–माओबादी एकतालाई मन नपराउने र यसको फूट चाहने शक्तिहरुले खेले सभावित भूमिका यस्तो हुन् सक्छ भन्नेतर्फ वाम नेताहरु सचेत हुनुपर्ने छ ।
३. चिनियाँ राजदूत एकताको अन्तिम समयमा किन बालुवाटार उपस्थित ?
एकता वार्ता चल्नु केहि समय अघि चिनियाँ राजदूत बालुवाटार पुगिन् यो सत्य हो । तर यसको कारण थियो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश बिभाग उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डललाई लिएर उनी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न पुगेकी थिइन् । सोही दिन उनले उक्त प्रतिनिधि मण्डल सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग पनि भेट गरिन् भने माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग त्यसको भोलिपल्ट । देउबासँगको भेटमा वाम एकता नहोस् भन्ने कुरा भयो होला त ? वा देउबाले एकता रोकिदिनुस् भने होला त ? त्यसमाथि चिनियाँहरु नेपालको बहुदलीय जन्जालमा यत्तिकै हराएका हुन्छन् । भाषिक र सांस्कृतिक फरकले यताका धेरै कुरा उनीहरु बुझ्नै सक्दैनन् । भर्खर प्रम भएका ओलीको सचिवालय ब्यवस्थित भएको थिएन । भेटका लागि अचानक समय पाएर चिनियाँ राजदूत आधा घन्टाको सूचनामा बालुवाटार पुगेकी रहिछन् । यद्यपि यस्ता सस्ता हल्ला चल्ने मौका नै नदिन वाम नेताहरु भेटघाटबारे सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
४. अहिलेको व्यवस्थाले वामलाई फाइदा पुग्यो, अब भारतले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ
एकजना नामी भारतीय पत्रकार अतुल ठाकुरले फागुन ९ गते अंग्रेजी दैनिक दि काठमान्डु पोस्टमा यस्तै लेखेका छन् । नेपालको संघीयता भारतले कसरी पुनर्विचार गर्छ थाहा भएन ।
५. यो वामलाई जिताउने व्यवस्था भयो, त्यसैले अब भारतको सहयोगमा राजतन्त्र फर्किन्छ
नेपाली जनताको मतले वाम दलले बिजय पाएका हुन् । राजा फर्किन त्यसका लागि संगठन पनि छैन, राजाप्रति जनतामा त्यत्रो आशक्ति पनि छैन । ज्ञानेन्द्र कतै जाँदा देखिने मानिसको समूह ‘ट्रेजेडी’को दर्शक मात्र हो । ग्रीसका प्राचीन दुखान्त नाटकमा वर्णित राजा हरुले सत्ता छोड्नुपरेको घटना रंगमंचमा रोचक हुन्छ । सबैले हेर्छन् तर ती राजाको पुनर्बहालीका लागि कुनै पनि दर्शक जीवन जोखिममा राखेर सडकमा निस्कंदैनन् । ज्ञानेन्द्रलाई हेरेर मानिस चुचुकाउलान्, सहानुभूतिका दुई शब्द ब्यक्त गर्लान्, तर उनको बहाली हुनुपर्छ भन्न कोही आन्दोलन गर्नेवाला छैन, पूर्व पञ्चहरु समेत ।
माथि उल्लेख गरेका भारतीय पत्रकार जो कुनै बेला राजालाई मधेसको दुश्मन ठान्थे, उनैले त्यहि लेखमा ०४७ सालको संविधान फर्काउनुपर्छ भनी लेखेका छन् ।
६. वाम सरकार अत्यधिक शक्तिशाली भयो, उसले अब कांग्रेस र अन्य बिपक्षीको दमन गर्छ
हो, सरकार शक्तिशाली छ । तर सरकार संविधान अनुसार बनेको हो र त्यसै अनुसार चल्छ । कांग्रेस मात्र होइन धेरै दल चल्न सक्ने भएकैले यसलाई बहुदलीय व्यवस्था भनिएको हो । दमन चाहिँ होइन, अब नयाँ वाम दलले देशव्यापी रुपमा पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम राख्ने तयारी गरेको छ । त्यसवेला कांग्रेस र अन्य पार्टीका ठूला नेता वामदल प्रवेश गर्नबाट ती दलका नेताले रोक्न सक्छन कि सक्दैनन् भन्ने चाहिँ रोचक हुने देखिन्छ ।
७. माओबादीले जबज मान्यो, एमालेले माओबाद मान्यो
यसमा आधा सत्य छ । दुबैले एक अर्कोलाई आजका बिन्दुसम्म मानेका छन् । एकता महाधिवेशनले विचारलाई विकास गर्नेछ र नयाँ पार्टी अघि बढ्नेछ । अर्थोक जे भए पनि नयाँ पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई र मानव अधिकारका विश्वब्यापी सिद्धान्तलाई मान्नैपर्छ, मानेको छ । तर, षडयन्त्र सिद्धान्तका प्रतिपादकहरु एकातिर माओवादी समर्थक समुहमा उत्तेजना भरियोस् भन्ने उद्धेश्य राखेर लेख्छन्– माओवादीले एमालेसामु आत्मसमर्पण गर्यो नि । खोई, माओवाद र बलिदानीको रापताप कता गयो ? तिनै फेरि अर्काेतिर एमालेको पंक्तिलाई भड्काउन लेख्छन्– अव १७ हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिनुपर्ने भो, केपी ओलीलाई घेराबन्दीमै हालियो नि । उनीहरुको चिन्ता के हो भन्ने कुरा यी दुईथरी भनाईबाटै बुझिन्छ ।
८. ओली पुरै गलेपछि मात्रै एकता भयो
न ओली गले, न प्रचण्ड । एकताको सुत्र फेला पारेपछि दुवै मिले । अब दुवै मिलेर पार्टी अघि बढाउने छन् भन्ने आशा वाम कार्यकर्ताले गरेको देखिन्छ । तर, गलेको सिद्धान्त पहिल्याएर राजनीतिलाई ब्यक्तिगत नाफा नोक्सानको तदर्थतामा घुमाईराख्ने र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास छेक्ने मनसाय यसमा देखिन्छ ।